Federal Dam, Minnesota, i-United States
Thola ukunambitha impilo yechibi ngesikhathi uhlala kule ndlu eqashisayo yeholide e-Federal Dam, Minnesota! Izinyathelo ezibekwe endaweni efanele ukusuka e-Leech Lake, leli gumbi lokulala eli-3, 2 igumbi lokugezela elingasemanzini elingafika kwayi-10 lilungele noma ngubani ofuna ukuphuma kukho futhi aphefumule umoya omusha waseMinnesota. Ikhabethe linikeza indawo yokuhlala engaphezu kwamamitha-skwele angu-1,100, nokho lisazwakala limnandi futhi lithokomele ngaphakathi! Uzothanda ukuchitha izinsuku echibini futhi ubuyele kuma-marshmallows ayosiwe ngasemgodini womlilo.
Igumbi lokulala 1: I-Queen Bed, I-Crib | Igumbi lokulala 2: Umbhede Ogcwele, Imibhede Emi-2 Yamawele | Igumbi Lokulala 3: Imibhede Emi-2 Yamawele, Umbhede Ogcwele
Lapho ungena kule khabhinethi, uzobona ngaso leso sikhathi udonga lwamafasitela abuka e-Leech Lake. Gxila emuva kufenisha ewubukhazikhazi ukuze ubungaze ukubukwa kwechibi noma ulethe incwadi futhi ulahleke kunoveli. Shona phansi echibini futhi ujabulele ubusuku obupholile.
Ngesikhathi sokuphumula, sebenzisa ukufinyelela kwe-inthanethi okungenantambo ukuze uvule inethi, wenze umsebenzi othile ngesikhathi uphumile ehhovisi noma ubheke iresiphi entsha ongayenzela isidlo sakusihlwa.
Asikho isidingo sokushiya ukunethezeka kwekhaya lakho-kude nasekhaya lapho indlala ihlasela. Ikhishi elihlome ngokuphelele linempahla yensimbi engagqwali nendawo eyanele yokubala yokulungiselela konke ukudla kwakho. Uma sekuyisikhathi sokudla, buthana eduze kwetafula lesitayela sepikiniki endaweni yokudlela ukuze umbe phakathi!
Ngezikhathi zakusihlwa ezifudumele, phumela ngaphandle bese usebenzisa i-gas grill ukuze wenze isidlo sakusihlwa esimnandi sezoso. Kukhona izihlalo ngaphandle zalabo abangathanda ukudla i-al-fresco. Ngemva kokuqeda ukudla, phuma uye endaweni yokucima umlilo ukuze wose ama-s'mores ukuze uthole isidlo sakusihlwa futhi uxoxe izindaba zomlilo wequbula! Bheka phezulu futhi ubungaze izigidi zezinkanyezi ezibonakala esibhakabhakeni ebusuku.
Ngena ngaphansi kwekhava yanoma yimiphi imibhede enethezekile uma sekuyisikhathi sokuyibiza ngokuthi ubusuku! Igumbi lokulala eliphakeme elisezingeni lokuqala linombhede wendlovukazi kanye nebhedi, kanti amagumbi okulala amabili aphezulu anikezela ngemibhede engamawele emi-2 nombhede ogcwele.
Le khabhinethi isesimweni esihle sokubuyela echibini langempela! Letha induku yakho ne-reel bese wehla uye ogwini ukuze ugibele ezinye izinhlanzi. Amanye amachibi endaweni alungele ukudoba ahlanganisa iLake Winnibigoshish neCass Lake.
Ayikho indlela engcono yokucindezela ukushisa kunokuyocwiliswa echibini ngezikhathi zantambama ezishisayo! Amanzi awukujula okuphelele kunoma ubani ofuna ukupholisa. Le ndawo ye-Leech Lake inomthamo omncane wezikebhe - ilungele ukubhukuda nokuthola nje ukuthula nokuzola ngenkathi uphumule emanzini.
Letha isikebhe sakho bese usethula ezansi nomgwaqo endaweni ye-Leech Lake Recreation Area! Hamba ngezinyawo uzungeze ichibi ngesitayela, ume kwezinye zezindawo zokudlela eziseduze nechibi ukuze udle futhi uphuze isiphuzo esiqabulayo.